Harry Potter: ၂၄ နာရီအတွင်း Wizards Unite သည်ဒေါ်လာ ၃၀၀၀၀၀ ရရှိသည် Androidsis
ပြီးခဲ့သည့်သောကြာနေ့ကတည်းက စပိန်နိုင်ငံရှိ Android တွင် Harry Potter: Wizards Unite ကိုကျွန်ုပ်တို့ကစားနိုင်ပြီ. Niantic ၏ဂိမ်းအသစ်သည်ဈေးကွက်တွင်အောင်မြင်မှုအသစ်တစ်ခုအတွက်အရာအားလုံးရှိသည်။ ဒီဟာကငါတို့ game format နဲ့ပါတ်သက်ပြီးပိုသိလာလို့ပါဘဲ။ ယခုစတင်ပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အချက်အလက်များစွာရရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏အောင်မြင်မှုကိုအတည်ပြုသည်။
ပထမဆုံးသောနေ့တွင် Harry Potter: Wizards Unite မှရရှိသောဝင်ငွေကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒီ Niantic ဂိမ်းအသစ်ဟာစျေးကွက်မှာစစ်ပွဲတွေအမြောက်အမြားပေးဖို့ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုထားခဲ့ပြီးပြီ။ သင်၏ဝင်ငွေသည်တစ်နေ့လျှင်ဒေါ်လာ ၃၀၀၀၀၀ အထိရှိသည်.
၎င်းသည်၎င်း၏ပထမဆုံးနေ့၌၎င်းသည်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်သာရနိုင်သည်ဟုသင်စဉ်းစားသောအခါ ပို၍ ပင်အထင်ကြီးစရာကောင်းသည်။ ထို့အပြင် Harry Potter: Wizards Unite သည်သာလိုအပ်ခဲ့သည် ၁၅ နာရီကြာအများဆုံး download လုပ်သည့်ဂိမ်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် Niantic ဂိမ်းဟာဈေးကွက်ထဲကိုစတင် ၀ င်ရောက်လာတယ်။
ယခုအချိန်တွင်, ၎င်း၏ပထမဆုံးနေ့တွင်ယူနစ် ၄၀၀,၀၀၀ ခန့်ကိုဒေါင်းလုပ်ရယူပြီးဖြစ်သည်။ ဒီရက်သတ္တပတ်များသိသိသာသာတိုးမြှင့်သွားကြသည်ကောင်းသောကိန်းဂဏန်းများ။ သူတို့ဝေးနေစဉ်စျေးကွက်စတင်အောင်မြင်မှုဖြစ်သောပိုကီမွန် GO နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
ဒီ Niantic ခေါင်းစဉ်အသစ်ဟာဈေးကွက်ထဲမှာကောင်းကောင်းနေဖို့အရာအားလုံးရှိနေတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်နေတုန်းပဲ။ ထို့ကြောင့်လူတိုင်းက Niantic သည်ဤ Saga အသစ်နှင့်အတူအောင်မြင်မှုအသစ်ရရှိမည်ဟုလောင်းနေသည်။ ဒါ့အပြင် ဂိမ်း၏ဝေဖန်မှုများအပြုသဘောဖြစ်ခဲ့သည်အသုံးပြုသူများနှင့်ဝေဖန်သူများအကြားနှစ် ဦး စလုံး။ လည်းကူညီပေးသည်တစ်ခုခု။
လာမည့်လများအတွင်း Harry Potter: Wizards Unite မည်သို့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရမည်။ ၎င်းသည်အစပြုခြင်းသည်အပြုသဘောဆောင်သည်ဟုထင်ရပြီး၎င်းသည်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သောနိုင်ငံများမှသုံးစွဲသူများကိုစိတ် ၀ င်စားစေသည်။ မကြာမီကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ ၀ င်ငွေသို့မဟုတ်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိဒေါင်းလုပ်များအကြောင်းပိုမိုသောသတင်းအချက်အလက်များကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » Harry Potter: Wizards Unite သည်၎င်း၏ပထမဆုံးနေ့တွင်ဒေါ်လာ ၃၀၀၀၀၀ ရရှိခဲ့သည်
Xiaomi Mi CC9 နှင့် CC9e တို့သည်တင်ဆက်သည့်ရက်စွဲရှိသည်